Blackjack ingenye ethandwa kakhulu imidlalo yemakhadi ezindaweni zokugembula - komhlaba-based, online futhi mobile. Ungadlala blackjack for imali yangempela at mFortune Mobile Casino. The game has simple rules that are easy to learn, kodwa kudinga ikhono ukuze ukwazi ukudlala ngempumelelo. Lokhu kwenza blackjack lidumile amateur, kanye abadlali professional.
Play Blackjack at Casino Zethu Kunconywe
Idlalwa kanjani Blackjack
Ungadlala blackjack at mFortune Casino for fun noma imali yangempela. Ungafaka kubhejwa ngoba njengoba kancane njengoba 10p.
Inhloso yalo mdlalo we-blackjack ukuthola isandla closer 21 ukwedlula nomthengisi, ngaphandle kokuya phezu (libanjwe). Uma ubekwe ngezimali zakho, wena kuzobhekwana amakhadi amabili babhekene phezulu nomthengisi kuzobhekwana ikhadi face up and ubuso bomuntu ikhadi phansi. Manje isidlali kuyodingeka unqume ukuthi ukudlala isandla. Ungakwazi ume kuze kube sekugcineni kuyithuba lakho; hit ukuthola ikhadi elilodwa elengeziwe lokuphendula; ngokuphindwe kabili phansi amakhadi akho ababili bokuqala kabili ukubheja yakho bese zithola ikhadi elilodwa ngaphezulu; esehlukanisa isandla sakho zibe kubhejwa ezimbili ezahlukene uma une amakhadi amabili ezifanayo amakhadi akho zokuqala ezimbili noma athathe umshwalense uma up-ikhadi umthengisi sika kuyinto Ace.
Zonke amakhadi zinenani futhi la magugu kunezelwa ndawonye ukuba kungaze inani esandleni sakho. Amakhadi amabili ngokusebenzisa eziyishumi sinokubaluleka ubuso babo; Ubuso amakhadi abe ukubaluleka eziyishumi kanye Aces zinenani elilodwa noma eyishumi nanye, kuye ngenani sonke isandla sakho. The esiphezulu amagoli isandla njengoba Blackjack eyaziwa futhi lena isandla ezimbili ikhadi ehlanganisa i Ace nekhadi zenani 10.
Once kuyithuba lakho iphelile (uya libanjwe noma wena ume), umthengisi udlala isandla sakhe kanye izandla iqhathaniswa nawe kokuba kukhokhwe noma yikuphi kwi.